Saka mainty ho an'ny Halloween | Asa tanana
Saka mainty ho an'ny Halloween
Jenny monge | 23/10/2021 10:00 | Asa tanana Halloween, Asa-tanana ho an'ny ankizy
Salama daholo! Ny iray amin'ireo biby solontenan'ny Halloween indrindra dia tsy isalasalana fa ny saka mainty. Noho izany, anio no hitondranay anao safidy maromaro hanaovana ireto saka ireto miaraka amin'ireo ankizy kely ao an-trano amin'ireo daty ireo.
Te hahafantatra ireo safidy ireo ve ianao?
1 Saka mainty laharana 1: saka mihantona
2 Saka mainty laharana 2: Saka baoritra mora atao amin'ny ankizy
3 Saka mainty isa 3: endrika saka mainty
4 Saka mainty laharana faha-4: saka mainty Eva rubber
5 Saka mainty laharana faha-5: saka tsotra misy fantsona taratasy fidiovana anaty baoritra
Saka mainty laharana 1: saka mihantona
Maninona raha ampiasaina ity biby ity handravaka ny fidiranay amin'ny Halloween?
Azonao atao ny mahita ny fomba fanaovana an'io asa-tanana io amin'ny rohy manaraka: Saka ho an'ny Halloween
Saka mainty laharana 2: Saka baoritra mora atao amin'ny ankizy
Ity saka sariaka ity dia hahatonga ny mpianakavy rehetra hanana fotoana fialamboly.
Azonao atao ny mahita ny fomba fanaovana an'io asa-tanana io amin'ny rohy manaraka: Saka mainty misy baoritra: asa tanana Halloween hatao amin'ny ankizy
Saka mainty isa 3: endrika saka mainty
Ity saka ity dia tsara indrindra handravahana ny zorony rehetra, mba hizahantsika maso ny trano amin'ireo daty ireo.
Azonao atao ny mahita ny fomba fanaovana an'io asa-tanana io amin'ny rohy manaraka: Ahoana ny fomba hanaovana sary saka mainty ho an'ny Halloween
Saka mainty laharana faha-4: saka mainty Eva rubber
Safidy tonga lafatra iray hafa tokony hatao amin'ireo ankizy kely ao an-trano sy handravahana izay efitrano rehetra amin'ny Halloween.
Azonao atao ny mahita ny fomba fanaovana an'io asa-tanana io amin'ny rohy manaraka: Saka mainty eva mainty handravahana ny fetinao Halloween
Saka mainty laharana faha-5: saka tsotra misy fantsona taratasy fidiovana anaty baoritra
Asa-tanana tsotra sy azo averina ampiasaina izay hipetraka amin'ny trano rehetra.
Azonao atao ny mahita ny fomba fanaovana an'io asa-tanana io amin'ny rohy manaraka: Saka misy fantsona baoritra
Ary vonona! Ny zavatra tsara momba ireo zava-kanto rehetra ireo dia ny ahafahantsika manohy mampiasa azy ireo handravaka aorian'ny Halloween raha tiantsika. Safidy iray hafa ny famonjena azy ireo amin'ny taona manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa-tanana ho an'ny ankizy » Saka mainty ho an'ny Halloween
Baolina manipy baolina ho an'ny Halloween
Meksikana andron'ny karandoha maty